Iindaba - Iipallet zensimbi ezahlukeneyo zisetyenziswa kwindawo yokugcina izinto
Iipallet zensimbi ezahlukeneyo zisetyenziswa kwindawo yokugcina izinto
Ipallet sisixhobo esibalulekileyo sokugcina. Phakathi kwazo, izibonelelo zeepelethi zensimbi ziyabonakala. Ngenxa yokuba izinto zenziwe ngentsimbi, ke indawo yokuhlala ingaphezulu komthamo womthwalo weepelethi zomthi kunye neepallet zeplastiki. Powder wawutyabeka kwaye kwalenza unyango umphezulu makenze ukhuseleko umhlwa olomeleleyo.
Iipelethi zentsimbi zisetyenziselwa iimveliso zevenkile ngokuthe ngqo, kwaye ezinye zisetyenziswa kunye nendawo yokugcina izinto zokugcina ukutya. Kananjalo banokusetyenziswa kunye ne-drive kwinkqubo ye-racking okanye i-shuttle system. Ukuqhuba kwindawo yokubeka kufuna inani elikhulu leepelethi ukugcina iimveliso. Ubungakanani beepelethi zensimbi eziqhelekileyo zezi: 1200 * 1200mm, 1200 * 1000mm, kunye no-800 * 1200mm. Kwaye ubukhulu becala, ubungakanani, imilo kunye nomthwalo womthwalo weepelethi zentsimbi zingenziwa ngokwezifiso.
Ezinye iipelethi zentsimbi zisetyenziselwa ukuhambisa kunye nokugcina irabha kumzi mveliso weevili. Njengoko sonke sisazi ukuba irabha iya kuncamathela. Kule meko, sinokukhetha iipellets zentsimbi kwalenza. Iipallethi zentsimbi ezinoxinano zinokumelana nokubola okukhulu kwaye zinokusetyenziselwa ngaphandle okanye kwindawo yokugcina ebandayo.
Kule mihla, iipelethi zentsimbi ezinamacala amabini ziyathandwa kwindawo yokugcina izinto, ezinokusetyenziselwa ukugcina irayisi, iinkozo nokunye ukutya. Akukho mfuneko yokuba uzibeke kwishelufa yokubeka. Ubunzima bomthamo wolu hlobo lweepelethi zentsimbi bunokufikelela kwiitoni ezi-3, kwaye ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso. Singavelisa iipellets zekona zesikwere kunye neepelethi zentsimbi ezijikeleziweyo zekona njengemfuno zabaxhasi.